Coronavirus covid-19 Lockdown update: Paunomuka uye ukaona kuti wabatwa, chii chaungaita? : Martin Vrijland
Pakatanga gore ra2020 ndakanzwa kunge rave gore rakaoma. Kuona nhanho dzekupedzisira dzakananga kuzere coronavirus covid-19 kukiya izvozvi kunopa imwe tariro kuti ichapera munguva pfupi. PaEvha dzeGore Idzva, ndakanyora kuti: "Panyaya yangu, 2020 richava iro gore revaroyi uye nhanho yeanoshanduka. Shanduko dzatisati tamboona munhoroondo. Nguva iri kupera yevatongi vepasi rino. "Vangosara nemakore makumi maviri neshanu kusvika pazerekunyepa."
Mubhuku rangu pakupera kwa2019, ndakafanotaura kuti pachange paine chirwere uye kuratidza kuti tiri kupupurira hutachiona hwehutachiona. Ndichangosvika munaFebruary 24, ini ndakanyora chinyorwa chinoratidza kuti yaive nguva yekuzvibata. Aive mavhiki zvisati zvaitika zvaitoita kunge emergency muNetherlands. Mufananidzo uyo wenhau wakaratidza we (zvimwe) IMBers avo vairongedza bepa remuchimbuzi raive, mumaonero angu, rakangwara midhiya hurongwa hwekuchecheudza kutarisa kubva pane zvaunofanirwa kunge uchitenga: chikafu chenguva refu, chikafu chakabikwa, mvura nezvimwewo. Neraki, vaverengi vaive pano mune yakawanda nguva nguva isati yavhunduka.
Tariro yekuti "cabal" ichaiswa pachena
Mamwe mafungidziro akakwana akawanda akateedzerwa mumavhiki apfuura uye ini ndakaona matanho aizotevera. Ndokusaka ndichigara ndichibvunzwa: "Chii chandinofanira kuita izvozvi?", "Ndingaite sei nematanho ese?"
Pama media media tava kuona mavhidhiyo se Janet Ossebaard tenderera. Anoratidzira Donald Trump semuponesi wevanhu, uye vanoona vanoshevedzwa kuti vazviise pane zvese zvinoitika kwavari. Mavhidhiyo ake anoedza kuita kuti vanhu vatende kuti tiri kuridzwa, asi isu tinonyatsoona kuita kwakapetwa kwekushora kuno. Janet Ossebaard anoedza kupinza vanhu mu Q-Anon kuchengetedzwa kwemambure. Anotizve Donald Trump ari kubatikana 'iyo cabaluye kuti iyo coronavirus inoita basa mune izvi.
Izvo zvisingazivikanwe nevanhu ndezvekuti mimwe midhiya yakawanda yakagadzirwa kuti itambe zvakapetwa kaviri. Ivo vanokupa tariro yekuponesa vatorwa kana nezvekudonha kwekabalari (naTrump semununuri). Ndinofanira kubatsira vanhu avo kubva muchiroto: Iyo cabal haingawiri.
Vanotarisa mavhidhiyo ake anoiswa munzira yekuita. Ini ndinoti kwavari:
Iwe unosundirwa mukati mekunze nevanhu vanogara kuseri kwekhamera uye vanokuita kuti vanzwe kunge vari kukugadzirira iwe. Iko kunyepedzera kuti Q-Anon ndiyo yakavanzika kirabhu yavanhu vakatenderedza Trump anoda kutora hupfumi kubva ku1%. Ivo havasi kuuya kuzokununura! Zvinosuruvarisa. Kuodzwa mwoyo. Iyoyo itariro yenhema.
Trump ndiye cabal. Trump sekungoomesesa kwemaitiro ekuvhara matanho. Mufananidzo wakaratidzirwa kuti makumi ezviuru eVadziviriri 2020 mauto akagadzirira kuchenesa 'iyo cabal' muEurope tariro yekunyepa.
Janet Ossebaard anodaidzira kuti iwe ugare wakadzikama mukati kana aya mauto anotanga kuchenesa vafundisi. Tora mufananidzo?
Janet Ossebaard anoti zvakare kuchave nekugadziriswazve kwemari umo hupfumi hunorara zvino nehupfumi 1% huchayerera hudzokera kuvanhu. "Muponesi mukuru VaTrump vachakurongera izvozvo iwewe." Kwete, haadaro. Izvo zvaachaita (kungofanana nevatungamiriri veEurope) achakupa iwe mari yekutanga uye zvinokwanisika kuti makuru makuru, mabhanga uye mari yepension anozozivikanwa. Unoziva here icho chinonzi? Chikominisi.
Tiri kuenda takananga kuCommunist system. Chitima chinomhanya. Ndakarondedzera izvozvo zvakadzama ichi chinyorwa.
Saka isu tiri chaizvo kupupurira reset yemari, asi imwe mhando kunze Q-Anon naJanet Ossebaard vari kukuudza. Ndanga ndichitaura pano pane saiti kwemakore kuti reset yakadaro yaifanira kugadzirwa (maona pano. Hutachiona hwe corona ikozvino hwava albi. Kuti chaunga chinogona kuridzwa munzira imwe kana neimwe chinogoneka, asi nyaya yaJanet Ossebaard izere nemabhata enhau enhema (seano pano akatsanangura)
Iyo nzira yemakomunisheni iyo Janet Ossebaard nevamwe vazhinji vava kukudza, uku vachidana kuti iwe ugare wakanyarara, zvechokwadi une mudhara. Chichava chimwe chete hutsinye hwekudyidzana kwehunyanzvi iva hutongi.
Izvo zvinofanirwa kutarisirwa kuti pangave nevashoma vezvematongerwo enyika vanozosiya munda. Izvi zvingangoitika nekuti zvinobatsira kutsiva pawns yakatangisa maitiro aya euori nema pawns matsva ne 'maoko akaputsika'. Usanyengedzwa nemafungiro uye kufukidza mune imwe midhiya yakasarudzika iyo vamwe vanozivikanwa CEOs vakarega. Icho chikamu cheQ-Anon kuchengetedza mambure mutambo.
Iyo tekinoroji yemakoministist system ingangoreva kuti iwe uchawana zvakakosha basicities (mari, dzimba, nezvimwe), asi kuti iwe unozoongororwa netekinoroji.
Kufamba kwese kwaunoita kwaunotariswa nemaitiro makuru edatha. Kubuda kweiyo coronavirus kunovimbisa kuti nzira dzekuwedzera dzehunyanzvi dzinogona kuitwa nekukurumidza. Iwe unofanirwa kufunga nezveimwe indelible digit ID, iyo, semuenzaniso, inorekodha ihutachiona hwauve nahwo; kunyangwe wapora; iyo mishonga uye yekudziya iwe yaunotora uye hutano hwako hungangotariswa munguva chaiyo kubva mugore. Iwe unobva wave chikamu che5G internet yezvinhu.
Saka kana iwe uchimuka uye ona imwe nhepfenyuro yekuyedza kukuchengeta iwe munzira inongovapo nehafu chokwadi chakasanganiswa nenhema uye kubatsira kukumbira chikominisiti netariro dzenhema, unoona here kuti havasi kukunongedza kutekinoroji? njodzi inovandira. Ivo vanoda kuti iwe ugare mukati uye ingotendera mauto nemapurisa kuita chinhu chavo. Mushure mezvose, ivo vanouya kuzoshambidza iyo cabal. Kwete, kazhinji munhau inoshuma shanduko yemuchina muThe Hague kana Brussels; kazhinji havazokuratidze zvinotyisa zvacho. Uyu mutambo weChess unofunga nezve zvaunotarisira, kuitira kuti iwe urambe uchitevedzera zvakarondedzerwa.
Saka kana iwe uchida chaizvo kumuka, iwe unofanirwa kubuda kuburikidza nekunyepedzera kwenhema seQ-Anon naDonald Trump nyaya. Kana iwe uchida chaizvo kumuka, iwe unofanirwa kuona zviri kuitika uye ziva kuti hutongi hwehutongi hahuna kuitika. Hutongi hwehutongi uhwu hahusisiri kuenda. Hazvizombofi zvakare. Iko kusununguka kwawakatenderwa kunakirwa kunongodzoka chete kana iwe ukagamuchira 'mucherechedzo'. Icho chiyeuchidzo chechiporofita chebhaibheri? Hongu, izvi zvinorangarira chiporofita chebhaibheri:
Uye kuti hapana munhu anogona kutenga kana kutengesa kunze kwekuti ane mucherechedzo, zita rechikara, kana nhamba yezita rake ”(Zvakazarurwa 13: 16-17)
Mubhuku rangu ndinotsanangura kuti tiri munguva yekuporofita yekupedzisira. Nepo vazhinji vanofarira kufuratira chitendero mazuva ano, uye ini ndisingazvinamati pachangu, ndinoziva kuti vatungamiriri venyika vanotevedzera zvinamato. Izvo hazvisi chikonzero kuti VaTrump vazivise kuti Jerusarema rive guta guru reIsraeri, uye hazvireve kuti ivo vari kuda kuvaka zvakare tembere yaSoromoni. Mubhuku rangu ndinotsanangura kuti vatungamiriri venyika vanotevedzera sei 'master script'. Icho tenzi script iri ikozvino inojekeswa zvakajeka uye nekukurumidza pasi pemeso edu.
uye unoziva kuti wakasungwa
Isu munguva pfupi tichazoona en masse kuti isu takanyatso kuvharirwa. Ini ndinofungidzira kuti ichave nguva yakareba. Vanhu vacho vanofanira kutya zvikuru kuti vagamuchire matanho akasimba. Vazhinji vachakwanisa kuona vanhu vachitakurwa kubva kuseri kwemahwindo avo kana kubva pamhanza. Kutorwa nekuti vanogona kunge vaine hutachiona kana nekuti "havana kuteerera mirairo." Uye nekuti munhu wese ari mudzimba dzavo, hapana anobatsira.
Vezvenhau vanoenderera mberi vachitiudza kuti uri kupupurira kurapwa kwakachena uye kwakakodzera kuvhiya uye hapana munhu achazomboziva kuti vangani vanhu vachanyangarika kumagirazi. Kutenda kuna Janet Ossebaard iwe unomirira chinyararire; Nechivimbo "kuti Trump ari kuchenesa cabal".
Isu zvimwe tichazowana tarisiro pane vanhu vanobuda mumigwagwa nekuda kwekuneta uye nzara uye saka 'usateerere kurayirwa'. Defender 2020 ingango gadzirira izvo (kwete kuti uchenese "iyo cabal").
Ipapo, mushure memwedzi kana kuti pamwe gore, tariro shoma yekusunungurwa icharondedzerwa nevezvematongerwo enyika.
Tariro yekuti vezvenhau nezvematongerwo enyika vachazopedzisira vataura kuti pane mushonga unodzivirira hutachiona wobva watora mushonga. Uye zvinogona kufungidzirwa kuti izvi zvichasanganiswa pamwe nekuunzwa kwema digital system (sezvakatsanangurwa pamusoro), apo zvinogara zvakajeka kubva kumunhu wese kwaari uye kuti ndeupi mushonga waakatambira, kusanganisira wekutarisisa-nguva yehutano (uye inosanganisira CRISPR-CAS12 kuverenga uye kunyora mashandiro).
Ipapo iwe unogona kufamba zvakare. Kubva kunharaunda kuenda kunharaunda uye haisisiri pamwe nemhepo iyo yese yakavhurwa, asi miganhu yemiganhu ichave yakanyanya kuwanda nematare uye muhuwandu. Isu tinowana mutsauko muvanhu vanobvumidzwa kupinda mamwe matunhu nevamwe vasingatenderwe kupinda. Tiri kuenda kuhutongi hwehunyanzvi.
Chii chatingaite ipapo? Tinofanira kuramba mazino nepikiri here? Ndinotenda kune kodzero yekutanga yemunhu iyo isingafanire kutyorwa, uye irwo rusununguko. Ikozvino izvi zvakatyorwa kubvira panguva yekufungidzira uye haugone kuramba mamiriro emapurisa. Muchokwadi, chero chimiro chekupikisa chinomanikidzwa noutsinye. Kunyangwe iwe ukati pane vezvenhau kana mumba yekutandarira (pane Siri iri kuteerera mukati) kuti iwe unozviwana zvese zvinosekesa matanho, iwe unogona kuve mune yeutongi nyika.
Chero ani zvake ari chinhu chinotyisidzira anogona uye angangodaro araswa. Zvese izvi zvichaitika pasi peshoko re "midziyo yekoronavirus", nekuti vanhu vasingatevedzere iwo marayiridzo kana kuti pamwe vanopa zano kune vamwe kuti vatevedzere iwo maratidziro ane ngozi munharaunda.
Ini handina chaizvo matipi anoshanda mune zvaunokwanisa kuita. Ehe, asi izvo ndezvekuchinja kwekuziva uye mafungiro akasiyana zvachose kupfuura maitiro ekungomhara ayo midhiya nedzimwe nzira dzezvenhau zvino dzinomisa iwe. Izvo ndezve nezve activating kuti ndiwe ani chaizvo. Izvo ndezve kuita activation yekusimba yemunda munda uye chako chaicho. Izvo zvinonzwika semarara, asi hazvisi. Ini ndinongo tsanangurira iwe kwauri, ini ndinovimbisa.
Nekuona kuburikidza neye master script uye nekufanotaura kwakakodzera, zviri pachena kuti iyi inhanho yakakosha kune shanduko chaiyo. Ndagara ndataura kuti 1 nyaya ipfupi kune izvi. Ndokusaka ndakashanda kwenguva yakareba pabhuku rakajeka uye rinogoneka. Saka iwe unofanirwa kuverenga izvo kutanga .. Zvakakosha chaizvo izvozvi! Uye ipapo iwe unogona kuverenga izvo zvinowedzera kune iro bhuku, pano pane webhusaiti.
Isu tiri zvisikwa zvine simba kwazvo uye inguva yekubuda munzira yekuita. Iwe wakakura kwazvo kupfuura zvaunoziva! Nguva yekuziva.
Tevera kune ichi chinyorwa: verenga pano
Akaberekwa musungo mazita: evasar.nl
Tags: pakarepo, cabal, coronavirus, Covid-19, Donald, IMBers, Janet, lockdown, Ox-ndebvu, dambudziko, Q, Trump, kuputika
Alie Muana akanyora kuti:
Zvemahara wagamuchira, for free unopa…
Sei usisunungure mhinduro yako zvakasununguka?
Ini ndinowana pfungwa yekunyengerwa kutenga bhuku rako kuti uwane mhinduro yako.
Handifunge kuti zvinoenderana nezvakazarurirwa iwe zvaunofumura.
Kana kuti ndiri kutadza nezvazvo?
Kana iwe ukaenda kuchitoro chemabhuku Bhaibheri, unozvitora mahara here?
Kana iwe ukaenda kubiki yekubheka chingwa unowana iyo yemahara?
Kana iwe uchiona TV, hauna here unonyoreswa unobhadhara?
uye iwe unoti "Hapana chawakagamuchira, hapana kana chinhu chauchazopa ..."
Hapana kana chinhu chandanga ndichiita mahara kwemakore anopfuura manomwe, asi handikwanise kukumbira printer kuti iprinte bhuku rangu mahara.
Iri bhuku rinopa pfupiso yezvese makore manomwe uye zvese zviri mubhuku iri ndezvemahara uye inoverengwa nemahara inowanikwa pano pane saiti. Ipapo iwe unongofanirwa kutsvaga nekudzvanya kubva kuchinyorwa kuenda kuchinyorwa. Nekudaro, bhuku racho rinopa pfupiso yakapetana zvikuru uye saka rakagadzirwa; pakukumbira kwevaverengi vazhinji.
Tsigiro yako uye kuonga kunokosheswa. Zvirokwazvo hazvidikanwa. Zvinotenderwa.
Esmeevd akanyora kuti:
Ndichangotenga bhuku rako! Rega ndikurudzire makore. Chinhu chete icho chaicho chirikunzwa zvakanaka uye kuvimbwa neruzivo ndiwe!
Kwete vanhu vazhinji chete vandakanzwa nezvazvo.
Mubvunzo wangu unoverenga seinotevera.
Kusvika riinhi vanogona kutivharira? Zvinoreva nevana etc izvo zvisingatore nguva yakareba chaizvo? Kunze kweizvozvo uye kuziva kwese kwaunako! Iwe hausi kutya here kuti ivo vachakutora kana kukuita kuti unyangarika chero kupi kungave (dzimwe nguva kushamisika kuti kupi) zvinoreva kuti zvese zvinogona zvirokwazvo kuverenzwa pane internet. Uye inogona kusvika kusvika pazvinogona kuona kuti ndiani akatenga bhuku racho? Kuti ivo vatove kuzoita pane izvo kuti vakutore iwe. Ini ndichaverenga bhuku rako zvakanyatsonaka. Ida uye chengetedza.
Amai vane hanya pari zvino, asi kuziva kuti isu takanyanya uye tine simba kupfuura isu zvatinofunga! Asi sei mubvunzo uchiripo ..
Mhinduro yako kuna Martin haina kuchena. Rega ini
Ivo kazhinji havana kutombobuditswa mazita (iwe ikozvino unoziva mashandiro anoita ... matura, mapepa ekunyepera, bots ... asi kunyanya the IMB'ers) vanopindura kana zvakakosha kuti vezvenhau vagare zvizere pahwaro hwepfungwa dzenyika.
Iyi zvirokwazvo ndiyo rongedzero yevakajairwa nguva dzose, vasinga vateveri havatenderi!
Greta Thunberg anofarira kutamba panze nevamwe vana
zvinoita kunge isina kunyatsochengetwa iri kure kubva pahafu yemamita 😉
Kana iye akarara muNetherlands husiku muchirimo uye akabata chando chine--6 degrees Celsius muchirimo?
Hongu zvinotanga kunzwisa tsitsi (kana zvisiri izvo zvavaida).
Ndakadzidza kuti zvakadzika iwe unopinda mukati megomba rearabhi uye kana iwe uchinge wakwanisa kuwana izvo izvo zvakanaka (ndinofunga kuti saiti iyi ndiyo yakanyanya kunowanikwa muNetherlands) zvinowedzera kuve nyore kupfunya (inodzora dzimwe nzvimbo masayiti) (ruzivo rwepamutemo rweimwe nzira .
Kufunga kwako kuri kuita zvirinani nguva dzese. (Ini ndakafungawo makore mashoma apfuura kuti Baudet uye eg nigel farage chaizvo vakasiyana). Chero zvazvingaitika, ini ikozvino ndinotenda kune yakazara 100%
99% kana kupfuura mamwe mawebhusaiti anotongwa anopikisa
100% yevose vezvematongerwo enyika pasi rese vanonyatsotongwa ne (kushandira) vafumi. (hapana imwe isina kuongororwa).
Kite !!! Pekupedzisira Basic mari (nohee, verenga Mr Vrijland chinyorwa chaNovember 2019)
Vanhu vazhinji vanofara kwazvo kuti nyika ichauya kwavari nemari!
Mari yatiri kuvimba nayo yakafanana nyika yekugara.
Mari yatinoda, yekwavo (seyakafungidzirwa) vane zvakawanda uye isu tine zvishoma, zvino ingori zeros uye imwe iyo yatisingakwanise kuwana.
Asi isu takaitwa tichifara nemari zvakare, Martin anga atopa chinyorwa kwazviri, zvakanyanya kumberi, imbwa yacho dzimwe nguva inowana dumbu uye kune vamwe vese vakanaka, tora, Sit, Nhema, Pak, Zvakanaka
Pakeji yacho yakashambidzika, yakanaka
Saka kuAmerica vanoda kuita imwe mhando yekusvitsa kune basic mari (3000 usd pamhuri yandinotenda). Izvi zvinonyanya kuzokonzeresa iyo inonzi inowanikwa kwenguva pfupi mari (yenguva pfupi ndeye Newspeak yekusingaperi) muUS.
Zvinoratidzika kuti iyi mari yekutanga ichabhadharwa chete mune chaiyo mari (rudzi rweFED bitcoin) zvirinani ndanzwa izvozvo. Saka rega vanhu vese vajairane nemari itsva yeOne World.
Izvi ndizvo chaizvo zvichaitwa pasi rese.
Zvinoratidzika kuti vanhu muUS neAsia (asi ndanzwa izvi zvichitaurwa) vava kubuditsa 5G super nekukurumidza (pasina pushback nekuti huwandu hwevanhu hwava kuita zvimwe zvinhu). Ini ndinofunga izvi zvichaitikawo mune dzimwe nyika.
MuAfrica, uko nyika zhinji dzichiri pa3G, handizive kuti ndoita sei izvi.
Iko kune kunyange kutaura nezve 6G tekinoroji, ini handizive rudzi rwekutya kunounza. Iyi tekinoroji nyowani iri kufamba nekukurumidza zvekuti zvinhu zviri kusimuka apa yaive yapfuura isati yambounzwa.
Elon Musk ane maviri matombo anoyevedza anonzi anounza akawanda e5G satellite mumhepo kuti afukidze pasi rose.
Ini ndinoshamisika kuti izvi zviri sei nehunyanzvi, nekuti iyo frequency ye5G yaizoda diki diki, asi izvi ndizvo zvaunowana mune midhiya.
Kubva muna Kurume 19, 2020, COVID-19 haicharangwiwi semhedzisiro yakakura yezvirwere zvinotapukira (HCID) kuUK.
.. kunze kwekuMadurodam 🙂
Imhaka yekuti VaTrump, Bolsonaro naJohnson vese vanomiririra zita rakafanana: mhando kurudyi
Uye sekunyora kwandakaita kakawanda muzvinyorwa zvakawanda, vanhu vakaita saRobert Jensen, Alex Jones uye zvakafanana-mapapiro emuromo wemapapiro anofanirwa kunge ari mambure akanyanya ekudzivirira. Ivo vanofanirwa kuwana vateveri vazhinji vanotsoropodza vatori venhau uye nezvematongerwo enyika. Ivo vanofanirwa kubatsira kuvaka iwo mhando uye nekubatanidza zvakajeka humwe uzivi kumhando iyoyo. Vanofanira zvakare kubatanidza zvakajeka iyo brand kumisasa yaTrump (Trump, Bolsonaro, Johnson).
Ipapo iyo (yakajekeswa zvakajeka) rudzi ruchaputirwa pamwe chete. Mugwagwa wakasarudzwa izvozvi inzira ye "Vanonyepedzera kuti haina kushata nedenda re coronavirus". Iyo mhando kurudyi inobatanidzwa ne 'coronavirus dambudziko kuramba ".
Ipapo nyaya yacho inobviswa zvachose. Ipapo Trump naBolsonaro naJohnson (mugumo waBrexit) vanofanirwa kusiya munda uye bapiro rekare kuruboshwe rezvematongerwo enyika rinotora zvakare uye vanotsoropodza vanoenda kujeri; hapana munhu anofanira kutombofungidzira mainini venhau zvakare.
Mhedzisiro: hutongi hwehunyanzvi hwekudyidzana "nyika yekuponeswa" inosanganisira mapurisa ekufunga.
Lydia Roosje akanyora kuti:
Ndatenda Martin nekuziva kwako. Ini ndakatenga bhuku rako sePDP nekuti ndakanga ndisingazive kuti iro rekuvhara riri rose raizouya, asi hazvisi izvo kusvika pari zvino, isu vanhu "vakangwara" vechiDutch vanogona kubata "akangwara kuvhara". Ndinofanira kutaura kuti ndakambodonhedza pasi nekuti ini ndinofunga kuti hazvina mhosva kuti iwe unodana marudzi ese evanhu sekudzora kupesana, asi ikozvino ndinoona kuti iwe waive wakanaka kupfuura zvandaifunga panguva iyoyo. Sezvo Charlie H Ini ndakafungidzira mune imwe neimwe tsanga - chirevo chandaisada kushandisa nekuti ini ndoziva manje kuti fananidzo ye pedophile sodomy - uye zvechokwadi zvakawanda zvakafa zvakaguma zvave kumisikidzwa pachinangwa. Ini ndinoshamisika kuti vanhu vese vepasi rose vakaita sehwai dzakatsemurwa dzinotungamirirwa nekutya kuvharika uye kufambidzana munharaunda. Sezvo mutauro chiri chimiro chekuperetera, aya mazwi maviri ane chiyero kupfuura iwe chaungafunga pakuona kwekutanga. Chirevo chine kureba kwemuviri asi munharaunda padyo nechimwe chinhu chingadai chakasiyana zvachose. Uye kukiya, shuwa, kunoreva kuvharika kwemweya wedu kana kuti totipotent stem cell sezvaunodaidza iyo.
Bill Wesick wepadesicience101, haasisiri paYT asi playlists, uye ikozvino paocs101ark.com ane ruzivo pakudzora mutauro weSaturnal Luciferian coding mutauro uyo akatapukirwa nehutachiona chaihwo. Hauzozvione kusvika uchizozviziva. Nehurombo, 99% yedu gwai hatizvione.
Ndine dumbu rinorwadza pandinofunga nezve izvo zvakamirira vanhu, asi ita zvese zvandinogona kuti ndirambe ndichibatana neye yangu yepakutanga source code. Handina zvimwe zvakawanda zvekuita ...
« Ndokumbira utarise: iyo Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) zvinyorwa zvinyorwa zvisiri zvemanyepo
VaTrump, Q-Anon uye 'kuchenesa kwakadzika' ngano (Robert Jensen, Janet Ossebaard) »
ongorora op Sei vanhu vazhinji vakakukomberedza vachiita kunge mapofu?
SalmonInClick op Sei vanhu vazhinji vakakukomberedza vachiita kunge mapofu?
Martin Vrijland op Sei vanhu vazhinji vakakukomberedza vachiita kunge mapofu?